Buuraha Andes ee Venezuela | Safarka Absolut
Buuraha Andes ee Venezuela
Mid ka mid ah safafka ugu quruxda badan uguna ballaadhan adduunka waa Buuraha Andes. Waxay ka gudubtaa dhowr waddan oo ku yaal Koonfurta Ameerika waxayna ku safartaa wadar ahaan 8500 kiiloomitirquruxda saafi ah ...
Qeyb ka mid ah silsilada buurahaan ayaa ka gudubta Venezuela, waana tan loogu yeero Waqooyiga Andes: waa dhul aad u qurux badan oo buuro ah oo waliba soo mara Colombia iyo Ecuador. Laakiin maanta waxaan kaliya diirada saari doonaa Buuraha Andes ee Venezuela.
1 Buuraha Andes
2 Dalxiiska Andes ee Venezuela
Tani waa kan ugu dheer qaaradaha adduunka waxaana loo qaybin karaa saddex qaybood, the Waqooyiga andesah Xarunta dhexe ee Andess iyo Koonfurta Andes.
Woqooyiga Andes, waa kuwa maanta inna soo yeeraya, wax ka yar 150 kiiloomitir ballac ah iyo celcelis ahaan dhererkoodu waa 2500 mitir. Andes-ka bartamaha ku yaal waa kuwa ugu ballaadhan uguna sarreeya.
Waqooyiga Andes, oo sidoo kale loo yaqaan waqooyiga Andes, Waxay u dhexeeyaan Barquisimet-Carora depression, Venezuela, ilaa Bombón plateau, Peru. Magaalooyinka Venezuela sida Mérida, Trujillo ama Barquisimeto, waxay ku yaalliin buurahan muhiimka ah.
Iyada oo ay buurahani dhex maraan, muuqaalka Venezuela wuxuu helayaa astaamo shaqsiyeed oo badan. Waxaa jira dhul fidsan oo heerka badda ah laakiin sidoo kale waxaa jira buuro dhaadheer, waa sababtaas waxaa jira midabbo badan iyo qaab-dhismeedka dhulka oo ah wax cajiib ah.
Buuraha Andes ee Venezuela waxay leeyihiin saddex astaamood oo waaweyn: the Sierra de La Koulata, Sierra Nevada iyo Sierra de Santo Domingo. Waxay gaarayaan dherer dhan 5 mitir. Tusaale ahaan, meesha ugu sarreysa dalka waa halkaan, oo leh 5.007 mitir, Bolivar Fiinta. In kasta oo ay jiraan dad kale oo aad loo ixtiraamo sida kuwa oo kale Humbold oo leh 4-940 mitir, Bompland oo leh 4880 mitir ama Libaaxa oo wata 4.743 mitir.
Cimilada ayaa isku wareegeysa inta udhaxeysa cimilada cirifka, aad u sareysa, iyo cimilada ugu kulul cagaha buuraha hoostooda. Roobabku, sida waddanka oo dhan, laga bilaabo Abriil illaa Nofeembar. Webiyadu waxay ka gudbaan buuraha dhexdooda, taas oo dabcan aan la mari karin maxaa yeelay way gaagaaban yihiin oo waxay leeyihiin biyo mahiigaan ah. Socodkaasi wuxuu ku dhammaanayaa laba dheri biyood oo biyo ah: hal dhinac kan Kariibiyaanka, dhex mara harada Maracaibo, iyo dhinaca kale Orinoco, ee loo maro Webiga Apure.
Dhirta aagga sidoo kale waxay ku xiran tahay cimilada, cimilada, horeyna waan u ognahay, wax badan ayey ku leedahay joogga. Waxaa jira geedo caadi ah oo cimilo kulul oo aad u qalalan 400-ka mitir ee ugu horreeya joogga, ka dibna u muuqda Geedo waaweyn, oo ka sarreeya 3 kun mitir baadiyaha, ka sarreeya weli waxaa jira dhirta Paramera oo ka sarreysa 4 kun mitir oo aan horey u haysannay mosses iyo lichens.
The Andes of Venezuela sidaas ayey ka kooban tahay gobolka kaliya ee dalka leh noocyadan kala duwan ee dhirta. Aagga geedaha waaweyn, inta u dhexeysa 500 iyo 2 mitir, muuqaalku wuxuu u eg yahay keymo roob sidaa darteed waxaa ku yaal geedo kedar ah, laaluush, bucares, mahogany ... Way qurux badan tahay, maxaa yeelay Noocyada dhirta ayaa sidoo kale ka muuqda xayawaanka.
In Venezuela xayawaanka Andean waxaa jira bears, isuduwaha caanka ah ee Andes (In kasta oo aanu halkan ku noolayn, haddana marwalba wuu marayaa), koofiyadda dhagaxa leh ee koofiyadaha la sudhay, dhudhunka, deerada, shrews, bakaylaha, bisadaha duurjoogta ah, gorgorka madow, riyaha, guumaysyada, liqitaanka, baqbaqaaq boqornimo, xaashiyaha, ducks, iguanas, abeesooyinka, qorraxda iyo dorados iyo guabinas, oo ka mid ah noocyada kalluunka.
Kordhinta Andes ee Venezuela ayaa sameysa siyaasad ahaan juquraafi ahaan waxay ka gudbaan dhowr gobol oo dalka ka mid ahs: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida iyo Trujillo. Iyo sidaan kor ku sheegnay, waxaa jira magaalooyin dhowr ah oo muhiim ah sida Mérida, Trujillo, Boconó, San Cristóbal ...
La dhaqaalaha deegaanka loo isticmaali jiray in xoogga la saaro kobcinta kafeega iyo beerashada, laakiin kadib markii la helay batroolka waxbaa isbadalay. Maaha in dalagyadii ay joojiyeen in la sameeyo, xaqiiqdii halkan waxaa ka imanaya soo saarista baradhada, digiraha, geedo midho leh, khudaar, moos iyo celery, doofaarro, digaagga iyo lo'da suuqa maxalliga ah, laakiin maanta saliiddu waa mid madax bannaan.
Dalxiiska Andes ee Venezuela
In kasta oo muddo dheer qaybtan ka mid ah Venezuela ay ka maqnayd dalxiiska, haddana marwalba waxaan la xiriirnaa waddanka Kariibiyaanka, in muddo ahba, waxay u furneyd hawshan. Hagaajinta kaabayaasha isgaarsiinta (hagaajinta dhismaha waddooyinka tobannaankii sano ee la soo dhaafay) ayaa mishiinka ahaa.
In kasta oo go'doominta lagu sameeyay waxa loogu yeero shucuubta koonfurta ay ka fogeyneyso lacagta dalxiisku uga tago, si gaar ah ayay uga caawisay inay maanta qiimo ugu yeeshaan suuqan. Waana taas go'doominta ayaa ku ilaalisay dhammaan asal ahaan iyo midnimadooda gumeysiga.
Kuwa ku nool qaybtan dalka waxay u doodaan a dalxiiska fudud, saameyn yar, taas oo ilaalinaysa qaab nololeedkooda iyo deegaanka. Dalxiis gacanta ugu jira dadka laftiisa ama dalxiis aan ugu yeeri karno bulshada.
Qaar waan ka hadli karnaa Meelaha lagu taliyay ee halkan ku yaal Andes of Venezuela. Tusaale ahaan, magaalada Merida. Waxaa la aasaasay 1558 waxayna leedahay qurux badan Koofiyad gumeysi, iyadoo ay ku hareeraysan yihiin buuro wacdaro leh. Waxaad arki kartaa Qolka Archbishop's, xarunta dhexe ee Universidad de los Andes, Cathedral ama Qasriga Dowladda.
Merida waxay leedahay jidad qurxoon, naf arday, a suuqa degmada saddex dabaq oo aad u mashquul badan oo caan ah, qol jalaato leh in ka badan 600 oo dhadhan oo jalaato ah, ayaa Qolka jalaatada ee Coromoto, oo leh booskeeda Buuga Diiwaanka Guinness iyo jardiinooyin iyo fagaarayaal fara badan. Mid ka mid ah jardiinooyinka ugu caansan waa Los Chorros de Milla, oo leh harooyin, biyo-dhacyo iyo beer xayawaan ah.
Waxa kale oo jira Gawaarida Mérida kaasoo kuu kaxeynaya Pico Espejo oo dhererkeedu dhan yahay 4765 mitir, wax yarna ka hooseeya midda yurubta Mont Blanc. Beerta Dadweynaha ee Los Aleros, ayaa Beerta dhirta iyada oo socodkeeda qosolka leh ee geedaha saaran ... Oo haddaad buuraha jeclaan lahayd waxaad leedahay dalxiisyada Sierra Nevada leh dushooda sare.
Magaalo kale oo caan ah ayaa ah San Cristóbal, oo ah caasimada gobolka Táchira, oo ka yar 1000 mitir oo sare oo sidaas darteed leh dusha aad u wanaagsan. Waxay taariikhaysan tahay 1561 waxayna kudhowdahay soohdinta ay la wadaagaan Colombia sidaa darteed waa ganacsi heer sare ah. Sidoo kale, waxay leedahay kaniisado badan oo gumaysi ah oo la booqdo.
Trujillo Waa caasimada ugu yar dalka Venezuela Andean. Waa gumeysi aad u qurux badan sida gobolka oo dhan. Waxaa la aasaasay 1557 wuxuuna joogaa joog dhan 958 mitir. Waxay caan ku tahay taallada weyn ee loo yaqaan 'Virgin of Peace', oo dhererkeedu ka badan yahay 46 mitir, miisaankeeduna yahay 1200 tan. Waxay leedahay aragti wanaagsan oo sawirka halkan ka socdaa waa waajib. Magaalada qadiimiga ah waa qurux, oo leh baroque qurux badan iyo cathedral jaceyl.
Meelaha kale ee quruxda badan waa Jajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... meelahaas oo dhami waxay leeyihiin soo jiidasho iyo qaybta gastronomic iyo hudheelkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Buuraha Andes ee Venezuela
Maxay yihiin shirkadaha dawooyinka waaweyn ee Hindiya?
Webiga Sare, dabeecadda iyo muuqaallada